1. Efa tsy tokan-tena intsony amin’izao fotoana ilay mpilalao sarimihetsika, Jim Carrey.
1. Ho ampitaina amin’ny alalan’ny boky natao an-tsary ho an’ny ankizy ny tantaran’ny tarika Metallica.
Niarahan’ny tarika nanatontosa niaraka tamin’ilay mpanoratra Howie Abrams moa ity boky “The ABCs of Metallica” ity, izay mety hivoaka amin’ny volana novambra any.
. Niditra eo amin’ny sehatry ny varotra kojakoja ho an’ny tarehy ihany koa i Lady Gaga.
1 Nozarainy tao anaty tambazotra sosialy ireo sary voalohany amin’ny vokatra hamidiny izay mitondra ny marika Haus Laboratories. Ahitana lokomena sy “gloss” izany .
1. Namoaka fanambarana ny printsy William, izay fantatra loatra amin’ny fisokafan-tsainy ka handeferany sy hanekeny zavatra maro.
Hafatra nampitainy ho an’ireo LGBT na ireo lahy samy lahy sy vavy samy vavy miaraka na ireo pelaka sy sarim-bavy.
1. Niova ny fomba fiakanjon’i Céline Dion, fotoana vitsy taty aorian’ny nahafatesan’i René Angelil vadiny.
Afaka naneho ny tena naha izy azy izy, hoy ny hevitry ny maro fa niova ihany koa ny mpampiakanjo izay niara-niasa taminy.
1. Rehefa avy nandany vola mitentina 23.000 euros i Jack Johnson mba hitoviana amin’i David Beckham dia tapa-kevitra fa haka ny endrik’i Victoria Beckham,
vadin’ity mpilalao baolina kitra malaza indray. Nahatsapa indray mantsy ity tovolahy 22 taona ity, taty aoriana fa isan’ireo
Nandritra ilay lanonana Showtime Golden Globes Nominees Celebration notanterahina tao Hollywood mantsy dia niaraka tamin’i Ginger Gonzaga izy.
Ity mpilalao sarimihetsika, miara-mandray anjara aminy ao anatin’ilay andian-tantara Kidding ity izany no olon-tiany amin’izao. Hatramin’izay namonoan’ilay olon-tiany teo aloha, Cathriona White, tena izay dia izao vao nisy olona niaraka taminy ka nasehony tamim-pomba ofisialy.
2. Fotoana vitsy izay no nandeha ny sion-dresaka fa ilay mpilalao sarimihetsika Rami Malek no handray ny anjara asan’i James Bond, ao anatin’ity horonan-tsary ity. Nilaza moa ity mpilalao sarimihetsika ity fa mahafinaritra azy izany hilalao anjara toerana masiaka izany saingy tsy mbola fantatra ny mahakasika ny handraisany io anjara toeran’i James Bond io. Na dia mandeha aza ny resaka nefa dia mety tsy hifandray ihany ny tetiandro amin’ny fanodinana ny horonan-tsary James Bond sy ilay horonan-tsary “Mr Robot” handraisan’i Malek anjara, amin’izao fotoana.
3. Tany amin’ny taona 1994 tany dia voasazy handoa lamandy mitentina 22. 866 euros ilay mpanentana, Julien Lepers satria raha tokony ho 760.540 euros no nosoratany nandritra ny fanambaram-panana nataony dia 300.359 euros monja no nosoratany tamin’izany. Fantatra nefa amin’izao fotoana fa nanafina vola mitentina 1,08 tapitrisa euros indray ity mpanentana ity ka nanome fanazavana tsy nitombina loatra tamin’ny fampiasany ireo vola ireo. Efa mahatratra 505.000 euros izany izao ny hetra tokony ho aloan’i Julien Lepers, taorian’ireo tsy fanambarana marina ny vola tena miditra aminy ireo.
4. Nahatonga resa-be indray ny fandokoana tarehy entina hanaratsiana ny olona mainty fihodirana na “blackface”, any anaty aterineto. Ilay mpanakanto Aya Nakamura mantsy no lasibatra tamin’izany satria nisy vehivavy mpikirakira aterineto no nandoko tarehy no sady naka tahaka azy ary nindrana ny hirany. Olon-kafa no nizara izany ary nanakiana ny zavatra nataony. Fotoana vitsy taorian’io dia nofafan’ny “Instagram” ilay kaonty namoaka io horonan-tsary fohy io saingy mbola azo jerena ihany izany, taty aoriana. Tsy nahafaly an’i Aya Nakamura ny fangalana tahaka azy fa tsy nanisy resa-be momba ilay izy kosa nefa ity mpihira vao nisondrotra ity.